Nayakhabar.com: केराको कतिको खानुहुन्छ ? केरा सेवनको फाईदाहरु यस प्रकार छन्
केराको कतिको खानुहुन्छ ? केरा सेवनको फाईदाहरु यस प्रकार छन्
काठमाडौं । केरा भन्ने बित्तिकै हामीले पहेँलो तथा हरीयो फलफुल भन्ने बुझ्छौं । केरा केवल हाम्रो स्वास्थ्यका लागि मात्रै होइन छाला, कपाल तथा सारा घरेलु कामका लागि पनि निकै फाइदाजनक रहेको छ । केराको केही फाइदाका बारेमा हामी सबैले जाने पनि यसको धेरैनै फाइदाहरुका बारेमा भने अन्जान छौं । र पनि हामीले केरा खाइरहेका छौं । केराका फाइदाहरु इस प्रकार रहेका छन्ः
– केराले जुत्ता, छालाजन्य सामान, सिल्वर पालिस गर्न सकिन्छ । केरा छिलेर जुत्ता, छालाजन्य सामान र सिल्वरमा रगेड्दा उसमा चमक आउँछ ।
–दाँतको चमक बढाउछः दाँतको चमकाउन चाहानु हुन्छ भने केरालाई छिलेर ब्रस गरेपछि प्रत्येक दिन दाँतमा रगेड्नुहोस् । यसो गर्दा दाँतमा चमक बढछ ।
–छालाका लागि पनि फाइदा : केराको प्रयोगले धेरै कुरामा फइदा त हुन्छ नै । यस्तै फाइदा मध्य अर्को एक फाइदा हो–छालाको स्वच्छता र सौन्दर्यता । केरामा भिटामिन सी, ए, पोटासियम, क्याल्सियम, फोस्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स भरपूर मात्रामा पाइने भएकाले छालाको स्वच्छता र सौन्दर्यता जोगाउन सहयोग गर्छ ।
–छालाको लागि माइस्चराइजर हो केराः केरा खानका लागि स्वादिष्ट फल मात्रै होइन यो एक राम्रो माइस्चराइजर पनि हो । घरमै अनुहारमा लगाउन लेप बनाउनका लागि एक चौथाई पाकेको केरा, उसमा एक चम्चा मह तथा आधा चम्चा दहीलाई मिसाउनुस् । यसलाई राम्रोसँग मिसाएर आफ्नो अनुहारमा लगाउनुस् । लगभग १० देखि १५ मिनेटपछि मन तातो पानीले अनुहारलाई धुनु होस् । यसले अनुहारको चमक र छालाको स्वच्छतालाई निखार्छ ।
–कपाललाई दिन्छ पुर्नजन्म : लगातार रंग्याउँदा र केमिकलका कारण खराब र विग्रेको कपाललाई पुर्नजन्म दिन अर्थात पहिलेकै अवस्थामा ल्याउन केराले सहयोग गर्छ । भिटामिन बी र सीको श्रोत केरा हुनुको कारण यसले बेहत्तर पोषण दिन्छ । पोटासियम भरपुर रहेको केरा कपाललाई मुलायम पनि बनाउँछ । यदी तपाईंको कपाल धेरै सुख्खा र कडा छ भने एउटा केराको गुदीमा एक चम्चा ग्लिसरिन अथवा मह मिलाएर लेप बनाएर कपालमा लगाउनुस् । यसले कपालको समस्या हटाउँछ ।
–तनाव कम गर्छ :केराले तनाव कम गर्न सहयोग गर्छ । केरामा ट्राइप्टोफान नामक एमिनो एसिड हुन्छ, जसले दिमाखलाई स्फूर्त बनाउँछ । तनावग्रस्त व्यक्तिले केरा खाँदा आनन्द महसुस गर्छन् ।
–केराले जुत्ता चम्काउँछ : पोलेको ठाउमा पीडा कम गर्छ
–आगोले पोल्दा हुने पीडा कम गर्न केरा प्रयोग गर्न सकिन्छ । छिलेको कारण केरा सधैं शुद्ध तथा संक्रमण मुक्त हुन्छ । राम्र्रोसँग पाकेको केराको गुदी शरीरको पोलेको ठाउँमा लगाएर कपडा बाँधी दिँदा तुरुन्त आराम मिल्छ ।
–फुटेको खुट्टामा दिन्छ राहत : यस्तै यसले हात खुट्टामा आउने मुसाको समस्या हटाउन पनि मद्दत गर्छ । मुसा आएको ठाउँमा छिलेको केरा रगेड्दा तथा रातभर राखिदिँदा मुसाको समस्या हराउँछ । यही तपाई खुट्टा फुटेकाले चिन्तित हुनुहुन्छ भने केराको प्रयोग गरी राहत लिनुस् ।
यसका लागि खुट्टालाई मनतातो पानीमा डुबाएर क्यूमिक स्टोनले सफा गर्नुस् । यसपछि केरा र नरिवलको तेल मिलाएर लेप बनाएर फुटेको ठाउँमा लगाउनुस् । नरिवल र केरामा बोसो र भिटामिन भरपूर हुन्छ, जस कारण खुट्टाको सौन्दर्यता जोगाउन मद्दत गर्छ ।